Ke ungasebenzisa i-emojis ye-iPhone kwifowuni yakho ye-Android | Izikhokelo ze-Android
Uyisebenzisa njani i-iPhone emoji kwi-Android yakho
UManuel Ramirez | 04/11/2019 11:01 | Izifundo ze-Android
Ukuhamba kwabasebenzisi ukusuka kwi-iPhone ukuya kwi-Android kwaye ngokuchaseneyo kuya kuhlala kunjalo. Kolo tshintsho abaninzi bafuna Uyisebenzisa njani i-iPhone emoji kwiselfowuni yakho ye-Android, ke ngenxa yoku siza kunceda: ukukubonisa iindlela ezahlukeneyo onazo zokutshintsha.
Ezinye i-emoji ze-iPhone ezininzi ziya kuphosa, kodwa enkosi ukonyuka kokukhetha ngokwezifiso iifowuni ngokusekwe kwinkqubo yokusebenza ye-G enkulu kuGoogle, sinokuba nayo ngaphandle kweengxaki ezininzi. Siza kuyenza ukwenza ukuba ifowuni yethu ye-Android ifane kakhulu ne-iPhone; Ubuncinci kwii-emojis.
1 Iindlela ezi-3 zokutshintsha i-iPhone emoji kwi-Android yakho
2 Iibhodi eziphambili ze-emoji ze-iPhone
2.1 Ikhibhodi ye-Kika 2019
2.2 Ikhibhodi ye-Emoji
2.3 Ikhibhodi ye-Emoji Iimpawu ezintle
3 Ukutshintsha ifonti yefonti nge Iifonti ze-Emoji zeFlipFont 10
4 Sebenzisa i-emojis ye-Twitter kwiFancyKey ikhibhodi usetyenziso
Iindlela ezi-3 zokutshintsha i-iPhone emoji kwi-Android yakho
Ukuze ukwazi tshintsha i-emojis kwifowuni yakho ye-Android kwi-iPhone sineendlela ezintathu okanye iindlela. Inye kukufaka usetyenziso lwebhodi yezitshixo ene-emojis esiyifunayo ukuze sikwazi ukunxibelelana noogxa bethu kunye nosapho ngendlela ebesinokuthi ngayo kwifowuni yethu yohlobo lwe-Apple.
Kukho enye indlela, kwaye oku kukutshintsha ifonti emiselweyo esinayo kwisixhobo sethu esiphathwayo. Yiyo i Sinokusebenzisa iSwiftKey, Ikhibhodi kaGoogle okanye ii-Samsung's, ukuba besine-Galaxy, ukuze sisebenzise i-emojis kwaye ngaphandle kokuphulukana nezo mpawu zenze ukuba ezona bhodi zibalaseleyo zibekho kule OS yezixhobo eziphathwayo.
IBitmoji: Uyikhuphela njani kwaye uyenze njani i-Emojis yesiqhelo
Owesithathu usebenzisa iFancyKey, usetyenziso oluthi ivumela ukuba sitshintshe i-emojis yezo ze-Twitter. Kwaye uya kuzibuza ukuba kutheni le ye-Twitter. Kulula kakhulu, ziphantse zafana nezo ze-iPhone, ke kuya kuba lula kakhulu.
Sincoma ukhetho lwesibini. Kungenxa yokuba eyokuqala, nangona ikhawuleza, izakukunyanzela ukuba usebenzise le keyboard kwaye ubeke endaweni yayo nakweyiphi kwezi zintathu sizikhankanyileyo.
Kwaye siyakuxelela inyani, uchwetheza ngeSwiftKey enesicatshulwa esifanelekileyo okanye neGoogle Gboard, ekhanyayo kakhulu kwaye enamandla eminwe yethu, ibonisa lukhulu. Masifike kuyo, ke kuqala kuthi sonke sikubonise ezoapps ukuze ube nekhibhodi ene-emojis ye-iPhone.
Khumbula ukuba ukwazi ukutshintsha i-emojis ukusuka kumthombo wenkqubo ufuna isixhobo esikuvumela ukuba usebenzise ezinye iintlobo zoovimba. Enye yazo yiGlass, njengeNqaku 10, S10 kunye neS9 ...
Iibhodi eziphambili ze-emoji ze-iPhone
Sicebisa eziapp zintathu zebhodi yezitshixo ze-emojis kwikhibhodi yefowuni ye-Apple uzama zontathu kwaye uphonononge amava abakunika wona ngeentsuku zokuthatha isigqibo. Banamava afanayo, nangona benomahluko wabo ngaphezu kokubonakalayo. Siqala ngolandelelwano ngokwendlela esiyithande ngayo usetyenziso olunika uninzi kwaye, ewe, ezo emojis zifunwayo.
Ikhibhodi ye-Kika 2019
UKika unjalo usetyenziso lwebhodi yezitshixo ye-iPhone emojis ugqibe kakuhle. Kuya kufuneka ubone ukuba iphathwe kakuhle kangakanani luluntu lomsebenzisi kuphononongo lukaGoogle, ukuze uqonde ukuba inokuba yeyona ilungileyo kule mi sebenzi.
Inefonti, umbala kwaye sinokude sibeke imvelaphi yegalari. Ngaba ezahlukeneyo zebhodi yezitshixo kwaye hayi kuphela ngokusekwe kwi-emoji ye-iPhoneUkuba akunjalo, zama ukuzinika ikhibhodi onokuchwetheza ngokukhawuleza kwaye endaweni yoko, ubuncinci, amava onokunikwa yiSwiftKey okanye neGboard.
Kananjalo asinakuyihoya into yokuba ungathumela ii-GIFS, izitikha, loo nto ulungelelanise ngokuzenzekelayo, Iphaneli yelizwi kunye nenketho yokusebenzisa olunye lweelwimi ezingaphezu kwama-60. Oko kukuthi, sijamelene ne-keyboard epheleleyo kakhulu.
Ikhibhodi ye-Kika 2021-Ikhibhodi ye-Emoji, i-Emoticon, i-GIF
Umthuthukisi: Iqela leKika AI
Lolu hlelo lokusebenza lufana nolwangaphambili, kodwa iindidi yinto ebalulekileyo. Ngonaphakade ungasinika ukuba sisebenzise enye okanye enye, ke nolu uluhlu oluhle. Kwaye akukho kunqongophala kweempawu zokuyisebenzisa kumhla wethu. Singayitshintsha ifonti, imibala, izandi nkqu nokuguqula.
Xa kuziwa kwi-iPhone emojis, ungaS thumela nokuthumela iqela labo ngaxeshanye enkosi kwimisebenzi ekhethekileyo, ngaphandle kokuba nee-emojis ezingaphezulu kwama-3.600, ii-GIF, izitikha kunye nokunye okuninzi.
Inokhetho lokukhetha ngokwezifiso beka eyakho ifoto ngasemva kunye nevenkile yonke enenqwaba yemixholo yebhodi yezitshixo. Ayisiyiyo le nto kuphela, kodwa ukhetha ukuba nemixholo yemidlalo edumileyo efana neRovio kunye neeNtsholongwane ezinomsindo. Ikhibhodi ene-emoji ye-iPhone esebenza kakuhle kwaye ilula ngokuthelekiswa nabanye abakolu luhlu.
Ikhibhodi ye-Emoji Facemoji-Emojis, izitikha, imixholo, i-GIF
Umthuthukisi: I-APATO ze-EKATOX
Ikhibhodi ye-Emoji Iimpawu ezintle
Enye ikhibhodi egcwele ukhetho kwaye ibalasele ngokuba ne-iPhone emojis Sifuna kangakanani isixhobo sethu se-Android. Ukuba kukho into eyiphawulayo, ngaphandle kweso sizathu, kungenxa yoluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha ukuzenza. Isinika ukhetho lokudibanisa umqolo wee-emojis ukufikelela kuzo ngaphandle kwexesha.
Yigxininise loo nto Isitshixo ngasinye kwikhibhodi ye-Emoji ine-emoji yayo ukufikelela ngokukhawuleza; umsebenzi omangalisayo oya kusivumela ukuba sibhale zonke ezo emoticons sizifunayo. Inenamba elungileyo yemixholo yebhodi yezitshixo, nangona singakhange siyifumane leyo yeRovio yangaphambili.
Inyani yile yokuba ikhibhodi ewe yinto encinci, ke iyasinyanzela ukuba sijonge umxholo owenzelwe wena ukuze amava aphuculwe. Enye ikhibhodi ene-emojis ye-iPhone kwaye uya kubafumana kwindawo efanelekileyo ukuze bakwazi ukusebenzisa abanye ukuba sinqwenela.
Ikhibhodi ye-Emoji ye-Emoticons ezintle
Umthuthukisi: Ikhibhodi ye-Emoji enemibala
Ukutshintsha ifonti yefonti nge Iifonti ze-Emoji zeFlipFont 10
Khumbula ukuba uyafuna iselfowuni esivumela utshintsho lomthombo. Ngaphandle koko kuya kuba nzima ukutshintsha ifonti yenkqubo kwaye usebenzise i-emojis eza nale app eya kusivumela ukuba sisebenzise ezo ze-iPhone kwi-Android yethu.
Into yokuqala esiza kuyenza kukukhuphela le app:
Iifonti ze-Emoji zeFlipFont 10
Umthuthukisi: Imigca yasimahla
Xa uqala (kunye nokudlulisa isibhengezo sokuqala) siya kucinezela malunga «Jonga & Sebenzisa ifonti entsha».
Ifonti esiza kuyisebenzisa iya kuvela.
Cofa kuyo kwaye isikrini siza kuvela apho sinokubona khona ifonti entsha iza kufakwa njani ngee-emojis zabo.
Siza kuyisebenzisa ngokungagqibekanga kwaye into elandelayo kukukhetha ifonti ye-Emoji 10.
Le yeyona emojis ye-iPhone.
Sebenzisa i-emojis ye-Twitter kwiFancyKey ikhibhodi usetyenziso
Sihamba ne UFancyKey kunye neefowuni ze-iPhone (ezizezona zikwi-Twitter, kodwa ziyafana kakhulu)
Siqala ukukhuphela iFancyKey kwiVenkile yokudlala:
Umthuthukisi: Iilebhu zekhibhodi zeFancyKey
Sifaka usetyenziso kwiiselfowuni zethu, liqale kwaye Kuya kufuneka siyenze ngokungathi siyenza nenye ikhibhodi.
Emva kwezo zikrini zekhibhodi zokwenza ukuba isebenze, singaya kuseto lweFancy ukwenza ukuba i-emojis ye-iPhone isebenze.
Ukusuka kuseto siya kukhetho.
Kwicandelo lokubonisa esilikhethayo Izitayile ze-Emoji kwaye sikhetha i-Twitter.
Kuya kufuneka ukhuphele iphakheji ukuze ubenazo ii-emoji ze-Twitter kwaye ziyafana ngokufana nezo ze-iPhone.
Izinto ezintathu onokukhetha kuzo ukuze ukwazi ukusebenzisa i-iPhone emoji kwifowuni yakho ye-Android kwaye eya kukuvumela ukuba ungaphoswa yile fowuni ye-Apple kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Izifundo ze-Android » Uyisebenzisa njani i-iPhone emoji kwi-Android yakho
Ungayicima njani okanye uyivale iakhawunti yakho ye-Instagram
Isithuba esihambelanayo: Indlela yokukhuphela kunye nokuSebenzisa kwiiAkhawunti ezininzi